ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ | FLEGT
ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPA) တစ်ခုစီတွင် EU နှင့် မိတ်ဖက်နိုင်ငံတို့သည် ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကော်မတီ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ VPA အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို ကြီးကြပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကော်မတီတွင် နည်းပညာပိုင်းနှင့် နိုင်ငံရေးပိုင်း အစည်းအဝေးနှစ်ခုလုံးရှိသည်။ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များသည် EU နှင့် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံတို့ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ VPA အတွက်နောက်ဆက်တွဲ သို့မဟုတ် အဓိကစာသားတွင် ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်သည့် ကော်မတီ မည်ကဲ့သို့လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည်ကို ဖော်ပြထားသည်။
သို့ရာတွင် ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်သည့်ကော်မတီသည် စာချုပ်အား နှစ်ဖက်အဖွဲ့မှ အတည်ပြု လက်မှတ် ရေးထိုးပြီးမှသာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည်။ ဤအချက်သည် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း အဆင့်ပြီးဆုံး ၍ အဖွဲ့ဝင်များ VPA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့်အချိန်နှင့် အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးချိန်အကြား ကာလတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ် ခြင်းကိုကြီးကြပ်ရာတွင် ကွာဟနေနိုင် သည်ဟုဆိုလိုပါသည်။
ထို့ကြောင့် VPA လုပ်ငန်းစဉ်အများစုတွင် နှစ်ဖက်အဖွဲ့သည် ကြားဖြတ်ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီကို VPA လက်မှတ်ထိုးသည့်အချိန်နှင့် အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ကြားကာလတွင် ကြီးကြပ်ရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
အချို့ VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံများသည် ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီအတွက် အမည်အမျိုးမျိုးရှိ ပါသည်။ သာဓကအားဖြင့် ဂါနာနိုင်ငံတွင် ကော်မတီကို ပူးတွဲစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ဟု ခေါ်သည်။ ကင်မရွန်းတွင် ပူးတွဲအကောင်အထည် ဖော်ရေးကောင်စီဟု ခေါ်သည်။
VPA ၏ ပင်မစာသား သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုသည် ကော်မတီ၏ရည်ရွယ်ချက်၊ အခြေခံမူများနှင့် လုပ်ငန်းများကို ဖော်ပြထားသည်။ VPA ဆိုင်ရာကိုးကားစရာများ၏ ပူးတွဲအကောင်အထည် ဖော်ရေးကော်မတီ နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ဆက်တွဲအခန်းတွင်ကြည့်ပါ။
VPAs အများစုတွင် သီးခြားနောက်ဆက်တွဲဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်ကို အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းအစီအစဉ်သည် ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်သည့်ကော်မတီအတွက် လုပ်ငန်းစီမံချက် တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရန် နှင့် တိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်အခြေခံဖြစ်သည်။
အခြားကိစ္စရပ်များအနက် ကော်မတီ သည်။
အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ နှစ်စဉ် လုပ်ငန်းစီမံချက်များ နှင့် သမိုင်းမှတ်တိုင်များအတွက် အစီအစဉ် တစ်ခုကို ချမှတ်သည်။
မိတ်ဖက်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် EU ရှိ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများမှ တိုင်ကြားချက်များ နှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ကိုင်တွယ်သည်။
စနစ်အဆင်သင့်ဖြစ်မဖြစ်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ်အား ပူးတွဲ အကဲဖြတ်ခြင်းကိုကြီးကြပ်သည်။
FLEGT လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းကို အပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် စတင်ထုတ်ပေးမည့် ရက်ကို သတ်မှတ်ပေးရန် အကြံပြုထောက်ခံသည်။
လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်နှင့် လွတ်လပ်သော ဈေးကွက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသူတို့၏ အစီရင်ခံစာ များကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
အဖွဲ့များအကြား ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။
VPA နောက်ဆက်တွဲများအတွက် ပြင်ဆင်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ထောက်ခံ အကြံပြု ခြင်းများ ပြုလုပ်သည်။
VPA ၏လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာ နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက် မှုများအား စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်နှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း မှတွေ့ရှိ ချက်များကို တုံ့ပြန်ရန် ဘောင်တစ်ခုထူ ထောင်ပါသည်။
ကော်မတီ အစည်းအဝေးများနှင့် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများ၏ အဓိက သုံးသပ်ချက်များကို ထုတ်ပြန် ကြေညာသည်။
အချို့နိုင်ငံများတွင် ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီများသည် VPA တွင် မပါ၀င်သည့်သစ်တော နှင့်ဆက်စပ်နေသော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိစ္စရပ်များကို ဖော်ထုတ်ရန် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အတွက် ကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများသည် အောက်ပါတို့ နှင့်ပတ်သက် သည့် သတင်းအချက်အလက်များပေးနိုင်ပါသည်။
VPA ရည်ရွယ်ချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် နှင့် VPA အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း နှင့်ဆက်စပ်နေသော အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သည့် တိုးတက်မှု
FLEGT လိုင်စင်ရသစ် ကုန်သွယ်မှုပမာဏများ
တရားမ၀င်ထုတ်လုပ်ထားသော သစ်ထုတ်ကုန်များတင်ပို့ခြင်း သို့မဟုတ် တင်သွင်းခြင်းကို ကာကွယ်ရန် နှင့်၊ သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်း တရားမ၀င် ထုတ်လုပ်သော သစ်ကုန်သွယ်နေခြင်းကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လုပ်ဆောင်ချက်များ
FLEGT လိုင်စင်ပေးခြင်းအစီအစဉ်ကို မလိုက်နာသည့် ကိစ္စများနှင့် ထိုကိစ္စများကို ဖြေရှင်းရန်အရေးယူမှု
ပူးတွဲဥက္ကဌများ။ ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ပူးတွဲဥက္ကဌများသည် သစ်တောများကို တာဝန်ရှိသည့်ဝန်ကြီး၊ EU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ကဲ့သို့သော EU ကိုယ်စားအဖွဲ့၏ အကြီးတန်းအရာရှိ ကဲ့သို့သော မိတ်ဖက်နိုင်ငံမှ အကြီးတန်း အစိုးရအရာရှိများဖြစ်ကြပါသည်။
EU. VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွင် EU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် EU အတွက် ဦးဆောင်ပြီး EU အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်များကို EU အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းရန် ဖိတ်ခေါ်သည်။ ပူးပေါင်း ပါ၀င်ဖွယ်ရှိသည့် EU အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံ များသည် သစ်တောတွင်အကျိုးစီးပွားရှိသည့်နိုင်ငံများ၊ မိတ်ဖက် နိုင်ငံနှင့် သစ်ကုန်သွယ်ရန်စိတ်၀င်စားသောနိုင်ငံ သို့မဟုတ် မကြာသေးမီက ၎င်းနိုင်ငံတွင် ဆက်နွယ်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သူများ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။
VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံ။ မိတ်ဖက်နိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် အစိုးရ သစ်တော စည်းကမ်းထိန်းရေး အေဂျင်စီ၊ FLEGT လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန်အခွင့်အာဏာရှိသည့်အဖွဲ့၊ အကောက်ခွန်ဌာန နှင့် ဘဏ္ဍာရေးကိုတာဝန်ခံရသော ၀န်ကြီးဌာနများနှင့်ဌာနများ၊ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေး နှင့်၊ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားရေးရာများ ကဲ့သို့သော တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်တွင် ပါ၀င်သည့် ၀န်ကြီးဌာန များနှင့်အစိုးရဌာနများအများအားဖြင့် ပါဝင်ပါသည်။ ယနေ့အထိ အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် VPA အများစုတွင် မိတ်ဖက်နိုင်ငံ အစိုးရများသည် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ၊ သို့မဟုတ် ရပ်ရွာလူထုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များကို ပူးတွဲအကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အစိုးရများသည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက် သူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများသို့ တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် ကုမ္ပဏီအတွက် နည်းလမ်းများကို ချမှတ်ပေးခဲ့ ပါသည်။ VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံအချို့သည် လွှတ်တော်အမတ်များ နှင့်၊ သို့မဟုတ် ရိုးရာအာဏာပိုင်များ အတွက် ကော်မတီတွင် နေရာပေးထားခဲ့ပါသည်။
စောင့်ကြည့်သူများ။ ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီတစ်ခုစီတွင် အစည်းအဝေးများသို့ ပါ၀င်ရန် ဖိတ်ကြားသည့် အထူးတက်ကြွသောကိုယ်စားလှယ်တစ်စုရှိပါသည်။ နှစ်ဖက်အဖွဲ့များသည် အစည်းအဝေး များသို့ တက်ရောက်ရန် နှစ်ဖက် သဘောတူညီချက်ဖြင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ နှင့် အခြား စောင့်ကြည့်သူများကို ဖိတ်ကြားပါသည်။ စောင့်ကြည့်သူများသည် အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ကောင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်
သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်သော ကျွမ်းကျင်မှုကိုပေးခြင်း၊ ဥပမာ အကြံပေးများက တွေ့ရှိချက်များ အပေါ် အစီရင်ခံခြင်း
VPA ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် စိုးရိမ်မှုများကို နားလည်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်း၊ ဥပမာ အလှူရှင် မိတ်ဖက်များ
သီးခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုစီအတွက် ဖွဲ့ထားသောအဖွဲ့၏ အဖွဲ့၀င်များအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဥပမာ မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွင် EU အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ သို့မဟုတ် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကို ကိုယ်စားပြုရန်။ ဤအဖွဲ့၀င်များသည် ကော်မတီ၏ တရား၀င်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအပြင် ထပ်မံပါ၀င်လာ ခြင်းဖြစ်သည်
အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးရုံး။ ယနေ့အထိ VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံအများစုတွင် အစိုးရသည် ပူးတွဲ အကောင်အထည် ဖော်ရေးကော်မတီကို အစည်းအဝေးများစီစဉ်ရန်၊ ညှိနှိုင်းခြင်းအလုပ်များနှင့် ဆက်သွယ် ရာတွင်ကူညီရန် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးရုံးတစ်ရုံးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားတွင် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးရုံးသည် အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွင်အခြေစိုက်ပြီး ၎င်းကို EU ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့နှင့် ပတ်၀န်းကျင်နှင့် သစ်တောရေးရာ၀န်ကြီးဌာနမှ ပူးတွဲဦးဆောင်သည်။
အမျိုးသားအဆင့် VPA အကောင်အထည်ဖော်ရေးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများ
VPA ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီနှင့် ပတ်သက်သည့်နောက်ဆက်တွဲ
VPA လုပ်ငန်းစဥ်၏ အကောင်အထည်ဖော်သည့် အဆင့်
Liberia-EU. 2012. Progress Report: Moving Towards VPA Implementation. Preparation for the Implementation of the FLEGT Voluntary Partnership Agreement. 2011–2012. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]]
Ghana-EU. 2012. Annual Report 2012: Implementing the Ghana-EU Voluntary Partnership Agreement[PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]]
Cameroon-EU. 2013. Joint Annual Report 2013: On the Implementation of the FLEGT VPA in Cameroon [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]; in French]